Iimbono: Ilizwi leQonga labaThengi | Martech Zone
Ilizwi loMthengi (VoC) kukuqonda okuhlangeneyo kwiimfuno zabathengi, iimfuno, ukuqonda, kunye nokukhethwa okufunyanwa ngokubuza ngokuthe ngqo nangokungathanga ngqo. Ngelixa iwebhu yemveli kubahlalutyi isixelela okwenziwa lundwendwe kwindawo yakho, uhlalutyo lweVoC luphendula KUTHENI abathengi bethatha amanyathelo abawenzayo kwi-intanethi.
Ukuqonda liqonga elisebenzayo lophando elisebenzisa ukuthintela itekhnoloji kwiindawo ezininzi zokuchukumisa, kubandakanya idesktop, iselfowuni kunye nethebhulethi. I-iPerceptions inceda iinkampani ukuba ziyile, ziqokelele, zidibanise kwaye zihlalutye idatha yazo yeVoC.
Ukuqonda idibanisa idatha yeVoC kunye newebhu kubahlalutyi idatha efana noGoogle Analytics, ekuvumela ukuba:
Landelela amaxabiso okwaneliseka ngokwamaqela abatyeleli athile kunye nokuvavanya ngcono amaphepha okufika, amaphepha okuphuma, amagama aphambili okukhangela, imithombo yezendlela kunye nemikhankaso.
Linganisa amaqondo okuguqulwa ngokuthelekisa amaxabiso okugqitywa komsebenzi ukuze ufumane ukuqonda okungcono komjikelo wokuguqula Thelekisa amaxabiso okwoneliseka ngexesha kwindawo, amaphepha atyelelweyo, amacandelo atyelelweyo kunye nommandla wejografi.
Vavanya ixesha lesiza Ngokugqitywa komsebenzi ukwahlula phakathi kweendwendwe ezisokolayo ukufumana ulwazi kunye nabo babandakanyeka ngokuqinisekileyo kwisiza Fumana isicatshulwa esivulekileyo, izimvo zokwenyani kunye nengxelo yabasebenzisi abanxulunyaniswe nohlalutyo lokuziphatha.
Ukuqonda ixhasa iilwimi ezingama-32 kwaye zenziwe ngokwezifiso kwi-brand yakho.
tags: ingxelo yabathengiuphando lwabathengiingxeloingqiqoamakhadi ezimvoizimvoilizwiilizwi lomthengi